အားလုံးယူအေအီးအတွက်ကမ်းလွန်စီးပွားရေး Setup ကိုအကြောင်း - ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - ယူအေအီးအားလုံးအကြောင်းကမ်းလွန်စီးပွားရေး Setup ကို
ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွဲ့စည်းထားပါသည် ဒါကြောင့်မှတ်ပုံတင်သည်အဘယ်မှာရှိတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာ operating ၏ရည်ရွယ်ချက်။ , အခြားတစ်ဖက်တွင်မြင့်မားနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်တည်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်အနေနဲ့ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခွန်နှုန်းကိုသို့မဟုတ်အနိမ့်သို့မဟုတ်သုညအခွန်နှင့်တသားတ။ အချို့နိုင်ငံများတွင်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအထူးသဖြင့်သူများအလွန်အနည်းငယ်ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အလယ်အလတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်များရှိသည် - ဤလူမျိုးကိုမှသူတို့ကိုနှစ်လိုဖွယ်စေသည် အဘယ်သူသည်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထူထောင်ချင်လိမ့်မယ်။
ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အများနှင့်ဥပဒေနှင့်အညီတစ်ဦးကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြုမူသူအေးဂျင့်ရှိသင့် အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြား link ကို။ လူအတော်များများကြောင့်အနိမ့်အခွန်၏ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ start ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများ, နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအောင်၏လွယ်ကူခြင်းကနေလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် တိုင်းပြည်ထဲကအကောင့်အသစ်များ၏ Multi-ငွေကြေးရန်ပုံငွေ.
ယူအေအီးအတွက်ကမ်းလွန်စီးပွားရေး Setup ကိုများအတွက်စည်းမျဉ်းများ
ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသင့်ရဲ့ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်မီက, သငျသညျအခြို့သောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်:
လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်ရှိပါသည်။ အားလုံးရှယ်ယာအပြည့်အဝများတွင်ချထားပေးခြင်းနှင့် paid ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကုမ္ပဏီကခန့်အပ်ထားရပါမည်။ အဆိုပါ ယူအေအီးအခမဲ့ဇုန် ဤအအေးဂျင့်များ၏စာရင်းကိုပေးသည်။
100% အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်% ပစ္စုပ္ပန်နှင့် 100 ဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုခွင့်ပြုထားသည်။
အဘယ်မှာရှိတဦးတည်းကိုစတင်ရန်ပါဘူး ?. သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မီ, သငျသညျတခုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရှိရမည်။ သင်တစ်ဦးတရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တခုခြောက်လဘဏ်ကြေညာချက်တောင်းမည်, ရရှိ. ဘဏ်ပုံစံများတံဆိပ်ထု။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, သငျသညျရှေ့သွားနိုင်ပါတယ်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ဘို့စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်မီ, သငျသညျဖြည့်ဆည်းရန်ရှိသည်အချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဥပမာ, ကုမ္ပဏီ၏အမည်။ အဆိုပါအမည်ကုမ္ပဏီအားလုံးအကြောင်းပါသောအရာကိုကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏နာမတော်လီမိတက်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။
သငျသညျပြီးသားနာမည်တစ်ခုရှိပါက သင် registry ကိုနှင့်အတူစစ်ဆေးသင့် ရရှိနိုင်ဘို့။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လူဖြစ်ရနိုငျသညျ။ နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ရာအပေါ်အခြေခံပြီးန့်အသတ်မရှိပါ။ အဆိုပါဆောင်းပါးများနှင့်အသင်းစာချွန်လွှာ။ အများပြည်သူမဟုတျကွောငျးရှယ်ယာရှင်များပေါ်မှာရှိသမျှ registry ကိုဒေတာရှိပါတယ်တင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်အဖြစ်။
ဒါရိုက်တာအပါအဝင်အားလုံးရှယ်ယာရှင်များကသူတို့တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူတင်ပြရမယ် နှင့်လူနေအိမ်အဆင့်အတန်းအားလုံးတရားဝင်အထောက်အထား။ ဤရွေ့ကားမူရင်းကုမ္ပဏီနှင့် utility ကိုဥပဒေကြမ်းများ၏အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစတစ်ခုမူရင်းဘဏ်ခွင့်ပြုချက်စာတစ်စောင်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်များ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ထို့အပြင်ဤထောက်ပံ့ ဒေသခံတွေနှိုင်းယှဉ်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့ခိုင်ခံ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်း။ နိုင်ငံခြား Trustees မှဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသူတို့ရဲ့အကြွေးထံမှကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို shields တဲ့ "ဥပဒေရေးရာမြို့ရိုးကို" တည်ဆောက်ဖို့သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ privacy ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအမည်ဝှက်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဒါရိုက်တာများနှင့်သက်ဆိုင်သူများ၏အများပြည်သူမှတ်တမ်းများပြသရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့အဖြစ်နိုင်စေသည် ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သွားရန်။
ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယူအေအီးအခွန်အခမဲ့များမှာ; ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတွေပြည့်စုံပြန်ရဖို့ဆိုလိုသည်။ ဤသည်မှာထိုကြောင့်, ဒေသတွင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပိုမိုသက်ဆိုင်သူများအားပေး, ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးနှင့်ပိုပြီးစီးပွားဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကို။ အပြင်အခွန်၏ကင်းလွတ်ခွင့်အနေဖြင့်, ပြည်နယ်ကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တရားဝင်လိုက်စား၏အမှု၌, သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ခွင့်အာဏာကြောင့် Ethics ထည့်သွင်းကြောင်းသေချာ; သို့သော်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာတရားသဖြင့်စီရင်၏အမှု၌, သင်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို set up ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ကို virtual form မှာရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါတောင်မှသူကသူတို့ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပံ့အိမ်ခြံမြေဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကအတည်ပြု.
ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ထူထောင်ရန်ပိုမြန်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရန်အဘို့အဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူး, တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကသူ့ရုံးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စာရွက်စာတမ်းများရတဲ့နေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများကဖွင့်လှစ်ခဲ့ဘဏ်အကောင့်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မျိုးစုံငွေကြေးလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်အဘို့အလွယ်ကူစေသည် ထိုကဲ့သို့သောဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာမှတဆင့်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ပို့ချပေမယ့် ယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်။ , သင်၌ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးအချို့လှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်အဲဒီနေသောခေါင်းစဉ်:
တစ်ဦးကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတက်ချိန်ညှိခြင်းရာအရပျ၌ထားဥပဒေများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာအေးဂျင့်, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မြို့တော်နှင့်အတူ; သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့လည်းမရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်မရနိုငျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားသူတို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဖွင့်မြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းများနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းစတင်ရန် !.
သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျဒူဘိုင်းတစ် CV ကို upload လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုသင်ကူညီပေးရန်မင်္ဂလာရှိ၏။
ယခုပေးအပ်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီယောဘရှာဖွေသူများအဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျွန်ုပ်တို့၏အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။